Budata Animated GIF Creator maka Windows
Budata Animated GIF Creator
Free Budata maka Windows (2.36 MB)
Budata Animated GIF Creator,
Onye Okike GIF animated bụ mmemme dị irè nke ị nwere ike iji mepụta GIF animated ma ọ bụ dezie GIF dị adị. Site na mmemme a, ị nwere ike ịmepụta GIF animated mara mma site na ijikọ GIF, BMP, PNG, JPEG, TIFF, ICO, WMF, PSD, PSP, PCD faịlụ onyonyo.
Mgbe nbudata mmemme ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite usoro nkwadebe GIF ozugbo site na imeghe ya. Mmemme, nke nwere interface enyi na enyi na-enye aka, na-eduzi gị site na usoro achọrọ iji mepụta GIF animated. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ime GIF na ole na ole dị mfe nzọụkwụ. Ndị ọrụ kọmputa niile nwere ike ịmepụta GIF animated site na iji mmemme.
Ị nwere ike ịkwadebe GIF ọkachamara na ọbụna mepụta GIF na-atọ ụtọ ma mara mma maka mmemme nke nwere ike ịtụgharị foto JPEG na BMP na-akpaghị aka na GIF. Ị nwere ike ikpebi ndabere na igbu oge oge nke GIF ị kwadebere nime mmemme dị ka ọchịchọ gị.
Ị nwere ike ịmalite iji site na nbudata ụdị nnwale nke Animated GIF Creator, nke na-enye gị ohere ịmepụta GIF dị elu.
Animated GIF Creator Ụdịdị
Nha faịlụ: 2.36 MB
Mmepụta: Animated GIF Creator